24- RABIIC BINU ZIYAAD AL-XAARITHI
"Ma jiro qof sidaada oo kale runta iigu sheegay laga soo billaabo markii la i doortay."
Waxay ahayd goor ay magaalladii Rasuulka (scw) ee Madiina aynan weli hilmaamin murugadii uga timid geeridii khaliifkii muslimiinta ee Abuubakar Assiddiiq Allaha ka raalli noqdee. Waxay ahayd xilli ay wufuuddii ka kala imaanayay jihooyinkii kala duwanaa, si ay u doortaan Cumar Binu Khadaab, iyagoo ballan kula galaya inay siiyaan maqal iyo aqbalitaan waqti kasta oo lagu jiro.
Haddaba, goor subax ay tahay ayaa waxaa Amiiral-mu�iniinkii cusbaa u soo galay wafdi ka yimid Baxrayn, waxaa wafdigaas la socday kooxo kale oo iyagana la socday wafdiga. Allaha ka raalli noqdee, Cumar Binu Khadaab wuxuu si xiiso ay ku jirto u dhageysanayay hadalladii iyo dardaaramadii ay u soo jeedinayeen wufuuddaas, bal si uu uga helo talooyin iyo tusaale wax ku ool ah oo isaga anfacda.
Cumar oo ay saamaysay waanadii Al-Rabiic:
Wuxuu Cumar Binu Khadaab hadalka u fasaxay wufuuddii, hase ahaatee hadalladoodii ma uusan ka helin hadal naftiisa sidaas u sii saamaysay, wuxuuna markii danbe milicsaday nin uu kheyr ka fishay, ninkii ayuu u baaqay inuu hadlo, wuxuuna ku yiri �bal adigana soo daa waxaad hayso�. Ninkii wuxuu ku mahadiyay Eebbe (scw), wuuna amaanay, dabadeedna wuxuu yiri:- �adiga amiiral-mu�miniinoow waxaad ogaataa inaanan ummadda madax lagaaga dhigin aan ka ahayn inay tahay imtixaan uu Alle kugu imtixaanayo, ee Alle uga cabso wixii madax lagaaga dhigay, waxaadna ogaataa in haddii hareeraha webiga Furaat ay ku lunto neef ari ah in xaggeeda lagaa weydiin doono maalinta qiyaamaha�.
Cumar Binu Khadaab waxaa si weyn u saamaysay hadalkii uu yiri ninkaas, markaasuu ooyay, wuxuuna yiri �ma jiro qof laga soo billaabo markii aan khaliifka noqday iigu run sheegay sidaad adiga runta iigu sheegtay, ee kumaad tahay adiga?�. Wuxuu yiri �Al-Rabiic Binu Ziyaad Al-Xaarithi�. Cumar ayaa haddana weydiiyay �oo ma waxaad la dhalatay Haajir Binu Ziyaad?�. Wuxuu yiri �haa�.
Markii ay dadkii ka kala dareereen fadhigii uu fadhiyay Amiiral mu'miniinka Cumar Binu Khadaab, ayaa Cumar ku yiri Abuu Musa Al-Ashcari �waxaad noo soo ogaataa arrinka ku saabsan ninkaan, hadday daacad ka tahay hadalkiisaas waxaa hubaal ah inuu kheyr fara badan wato, isla markaasna uu noo noqon karo kaalmo weyn�. Kama soo wareegan waqtigaas wax yar, jeer maalintii danbe uu Abuu Muusaa Al-Ashcariy ka diyaariyay ciidankii furanayay magaallada �MANAADIR� kana tirsan gobolka Al-Ahwaz, isagoo markaas fulinayay amarkii uu siiyay khaliifka muslimiinta ee Cumar Binu Khadaab. Wuxuu Abuu Muusa ku daray ciidankii muslimiinta Al-Rabiic Binu Ziyaad iyo walaalkiis Haajir Binu Ziyaad.
Ciidankii uu hoggaaminayay Abuu Muusa waxay go�doomiyeen magaalladii Manaadir, waxayna gaalladii degganayd halkaas la galeen dagaal aad u weynaa oo si daran labada dhinac loogu hoobtay. Ciidankii gaallada waxay soo bandhigeen xeelad dagaaleed oo sarreysa, taasoo sababtay in ciidamadii muslimiinta laga laayo tiro aad u fara badan.
Iyagoo sooman ayeey dagaalamayeen:
Maalintaas ay muslimiinta dagaalka galayaan waxay ahayd bil Ramadaan, sidaa darteed waxay muslimiinta dagaalamayeen iyagoo sooman. Markii uu Muhaajir oo ay walaalo ahaayeen Al-Rabiic Binu Ziyaad arkay in dhimmashadii muslimiinta ay sii badanayso ayaa wuxuu goostay inuu naftiisa ku iibsado raalli ahaanshaha Eebbe (sw), oo uu markaas naftiisa jidka Alle dartii u qaddimo. Sidaa darteed wuxuu is mariyay barafuunka ama cadarka la mariyo meydka, wuuna is kafnay, isagoo u dardaarmayna walaalkiis.
Maadaama uu Al-Rabiic Binu Ziyaad Allaha ka raalli noqdee wuxuu jeclaystay in walaalkiis iyo ciidamada muslimiintaba ay afuraan, wuxuuna u tagay Abuu Muusa Al-Ashcariyi oo hoggaaminayay ciidanka, wuxuuna ku yiri �ninkii Muhaajir ahaa wuxuu goostay inuu naftiisa ku iibsado raalli ahaanshaha Eebbe (sw) weliba isagoo sooman, muslimiintiina waxaa isugu darsamay dagaalkii qaraaraa iyo iyagoo sooman, taasoo tabar-yareysay niyaddooda, wayna diideen inay afuraan ee wixii kula quman bal sameey�.
Abuu Muusa Al-Ashcariyi ayaa istaagay isagoo u dhawaaqaya ciidanka, wuxuuna ku yiri: �muslimiinoow waxaan goostay oo go�aansaday in qof kasta oo sooman uu afuro, ama uu isaga haro dagaalka�, wuxuuna soo qaatay ibriiq/kirli biyo ku jiray, sidiina ayuu biyihii ku cabbay, si dadkana ay u raacaan oo ay iyagana afuraan, maadaama uu yahay amiirkooda ay waajib tahay inay hadalkiisa aqbalaan. Markii uu Muhaajir maqlay hadalkii uu yiri Abuu Muusa ayaa wuxuu biyihii kabaday hal jeer, wuxuuna yiri � wallaahi uma cabbin oon i hayay dartii, hase ahaatee waxaan meel marinayay dhaartii uu dhaartay amiirkayga�. Waana tarbiyad ay ka barteen macalinkoodii weynaa ee Rasuulka (scw), oo wuxuu xaddiis macnihiisa ahaa ku yiri isagoo arrintan ka hadlayaya "qofkii aqbala amiirkayga waa qof i adeecay".
Madaxii Muhaajir oo la gooyay, lagana soo laalaadiyay meel sare:
Intaa kadib, wuxuu Muhaajir seeftiisa kala soo baxay galkeedii, sidiina ayuu ku galay dagaalkii. Wuxuu seeftiisii ku kala beeray safafkii dagaalka, wuxuuna billaabay inuu si geesinimo leh oo aan cabsi ku jirin uu dhulka u dhigo gaalladii uu la dagaalamayay. Inkastoo uu Muhaajir muujiyay wacdarradaas weyn, haddana waxaa markii danbe korkiisa dhinac weliba ka haleeshay seefihii iyo warmihii ay soo tuurayeen gaallada, ilaa markii danbe uu dhulka ku dhaco isagoo dangiigan oo meyd ah. Dhinaca kale, waxay gaalladii si aan naxariis lahayn u soo goosteen madaxii Muhaajir, waxayna ka soo laa-laadiyeen meel sare oo goobta dagaalka ka mid ahayd.
Al-Rabiic: waan ku aargudi doonaa:
Al-Rabiic Binu Ziyaad ayaa yiri "alla ayaan badnidaa, waxaana kuu sugnaatay meel loo dheelmado meeshii ugu wanaagsanayd", wuxuuna ula jeeday Jannada.
Al-Rabiic Binu Ziyaad ayaa eegay walaalkiis Muhaajir oo madaxiisa ka soo laalaada meel sare, markaasuu si ay sugnaansho iimaaneed ku jirto u yiri "alla ayaan badnidaa, waxaana kuu sugnaatay meel loo dheelmado meeshii ugu wanaagsanayd", wuxuuna ula jeeday Jannada. Dhinaca kale, wuxuu Al-Rabiic ballan ku galay inuu u aargudi doono walaalkiis, wuxuuna yiri "wallaahi ayaan ku dhaaranayaa inaan kuu aargudi doono adiga iyo muslimiinta la laayay-ba inshaalah".
Wuxuu la wareegay hoggaaminta ciidanka:
Markii uu arkay Abuu Muusaa Al-Ashcariyi sida uu Al-Rabiic uga walbahaaray geerida sida saxariirta leh ugu timid walaalkiis, ayaa waxaa la qumanaatay inuu hoggaaminta ciidanka uu uga tanaasulo Al-Rabiic, sidii ayuuna Rabiic ula wareegay hoggaaminta ciidanka, waxayna aadeen magaallada Suus si ay u furtaan. Ciidamadii muslimiinta ee uu hoggaaminayay Al-Rabiic ayaa sidii hufadii oo kale hal mar u galeen goobihii ay degganaayeen gaallada. Dagaal ba'an oo dhex maray ciidamadii muslimiinta iyo gaallada kadib, wuxuu Eebbe (sw) sabab uga dhigay Al-Rabiic Binu Ziyaad inuu furto magaalladii la oran jiray Manaadir. Waxay muslimiintii laayeen dagaalyahaniintii gaallada ahaa, waxayna soo qafaasheen ubadkoodii, iyagoo hantidoodiina intuu Alle doonay qaniimaystay (qaniimada waa hantida laga soo helo jihaadka).
Xiddigii Al-Rabiic oo soo birqay:
Dagaalkii Manaadir kadib waxaa birqay xiddiggii Al-Rabiic Binu Ziyaad, wuxuuna magaciisa ku faafay carab kasta iyo guud ahaan muslimiintii waqtigaas. Wuxuu ka mid noqday Al-Rabiic Binu Ziyaad madaxda sare loo eego, kuwaasoo iyaga looga fursan waayo markay xaaladdu qadhaadhaato. Muslimiintii markay goosteen inay furtaan gobolka Sijistaan waxay ballan adag ku galeen inuu Rabiic la wareego hoggaaminta dagaalkaas, iyagoo ka rajo qabay inuu u soo hoyan doono guulo waaweyn.
Ciidamadii uu hoggaaminayay Al-Rabiic Binu Ziyaad ayaa waxay u kicitimeen dhulka Sijistaan iyagoo jidka Alle ku duulaya. Wuxuu Al-Rabiic mariyay ciidankiisa dhul lama galaan ah oo aad u dheer aadna khatar u ah. Socod dheer kadib, magaalladii ugu horeysay ee uu la kulmay waxay ahayd magaallada loo yaqaano Rustaaqu Zaaliq, magaalladaan oo xad la leh magaallada Sijistaan, waxayna ahayd magaallada Rustaaqu Zaaliq magaallo aad u cammiran, lehna daaro aad u dhaaheer, sidoo kale wax soo saar badan. Waxaa magaallada ku hareereesnaa dhufeysyo aad u waaweyn.
Halyeeygii geesiga ahaa ee Al-Rabiic Binu Ziyaad wuxuu intuusan magaallada gelin diray ilaalo ciidamadiisa ka mid ah, si ay u soo indha-indheeyaan xaaladda magaallada.., waxayna ilaaladii soo ogaadeen inay dadka deggan magaalladaas ay u dabaaldagi doonaan xaflad ay leeyihiin. Wuxuu Al-Rabiic la beegsaday qabashada magaallada habeenkii ay dhiganayeen xafladda, sidiina ayuu si kedo ah dagaal ugu qaaday iyagoo ku mashquulsan xafladdooda.
Guddoomiyihii oo isna la qafaashay:
Gaallada raggoodii ciidamada ahaa wuu laayay Rabiic, halka uu soo qafaashayna kuwo kale oo gaarayay ilaa 20 000 qof, waxaana ku jiray kuwaas la soo qafaashay guddoomiyihii magaalladaas.
Sidoo kale, waxaa kaloo dadkii la qafaashay ku jiray addoon u shaqayn jiray guddoomiyaha degmada, wuxuuna haystay markaas lacag gaaraysa 300 000 oo dirham, (lacag aad iyo aad u fara badan) si uu u siiyo sayidkiisa. Al-Rabiic ayaa ku yiri ninkii "inteed ka keentay lacagtan faraha badan?!". Wuxuu yiri "waxay ka timid mid ka mid ah tuulooyinka uu xukumo sayidkayga". Al-Rabiic ayaa ku yiri "ma tuullo kasta waxay bixisaa lacagtaan oo kale sannad kasta". Wuxuu yiri "haa". Al-Rabiic ayaa yiri "siday ku dhacday?!". Wuxuu yiri "lacagtaan waxaan ka soo saarnaa faasasyadeena iyo dhididkeena" oo uu ula jeeday lacagtaas waa waxaan soo shaqaysanay oo aan ku soo tacabnay.
Muslimiintii oo helay hanti fara badan:
Markii uu qaboobay dagaalkii, ayaa waxaa Al-Rabiic Binu Ziyaad oo ahaa hoggaamiyaha ciidanka u yimid guddoomiyihii degmada, isagoo doonaya inuu bixiyo lacag furasho ah. Al-Rabiic ayaa ku yiri "waan ku sii deenayaa haddaad muslimiinta u badiso lacagta furashada". Guddoomiyihii degmada "imisaad doonaysaa?". Al-Rabiic Binu Ziyaad "waxaan dhulka ku qotominayaa warankan, dabadeedna waxaad korkiisa ku shubaysaa dahabka kiisa huruudka ah iyo fiddada ama qalinka ilaa aad ka qariso qarin". Guddoomiyhii degmada wuxuu yiri "waan oggolahay", wuxuuna kaasafoortadiisa ka soo saaray dahabkii kala duwanaa, isagoo warankii dhulka lagu qotomiyay korkiisa ku shubay jeer dahabkii ay qariyaan waranka.
Saxaabigii jaliilka ahaa ee Al-Rabiic Binu Ziyaad Allaha ka raalli noqdee waxay ciidankiisii guuleystay guda galeen markale sidii ay u furan lahaayeen gobolka Sijistaan. Dagaallo daran kadib, waxaa is fur-furay dhufeysyadii ku hareersanaa Sijistaan. Dadkii degganaa magaalooyinka iyo tuulooyinka waxay billaabeen inay soo dhoweeyaan ciidamadii Al-Rabiic Binu Ziyaad, iyagoo A-l-Rabiic ka dalbanaya nabadgelyo kahor intuusan ula bixin seefaha ilaa uu markii danbe ka gaaro magaallada Zaranj oo ahayd xarunta gobolka Sijistaan.
Waxyar kadib maba la joogin, jeer ciidamadii gaallada ay u diyaar garoobaan inay dagaal ku qaadaan ciidamada muslimiinta, waxayna isaga yeerteen meel kasta, si ay u difaacdaan magaalladoodii istiraatiijiga ahayd, arrintaasina wax kasta ha ku qaadatee. Labadii ciidan waxaa dhex martay dagaal si ba'an labada dhinac loogu hoobtay, iyadoo labada ciidanba ay ka dhinteen dad aad u badan.
Markii ay ciidamadii muslimiinta ay u soo muuqatay guushii dagaalka ayaa guddoomiyihii gaallada ee la oran jiray Barweez guda galay siduu ula heshiin lahaa Al-Rabiic Binu ziyaad, bal si uu isaga iyo tolkiisa ay u helaan wax u dhaama dhimmashada kaga imaanaysa dagaalka.
Barweez wuxuu ergo u diray Al-Rabiic Binu Ziyaad, isagoo weydiisanaya inuu u sameeyo madal ama ballan uu kula kulmo, si uu ugala xaajoodo nabad, wuuna ka aqbalay Al-Rabiic dalabkaas. Al-Rabiic Binu Ziyaad ayaa amray ciidamadiisa inay diyaariyaan goobtii uu kula kulmi lahaa Barweez, wuxuuna ciidankiisa ka dalbay in hareeraha goobta kulanka lagu soo daadiyo meydadkii gaalladii reer Furus ee dagaalka lagu laayay, iyo sidoo kale in meydad kale lagu daadiyo waddada labadeeda dhinac ee uu soo mari doono Barweez.
Wuu cabsanayay qofkii arkaa:
Al-Rabiic Binu Ziyaad wuxuu ahaa nin aad u dheer, lehna midab maariin, aadna u xoog badan. Cabsi ayaa lagu tuurayay qofkii arka Al-Rabiic. Barweez markii uu u soo galay Al-Rabiic waxaa durbadiiba gashay cabsi aad u weyn, cabsi awgeed ayuu ku sigtay inay nafta uga baxdo, kadib markii uu arkay meydadkii dadkiisii laga laayay ee lagu daadiyay waddada. Ma uusan ku dhiiran Barweez inuu u soo dhowaado Al-Rabiic si uu u salaamo. Wuxuu ka cabsaday in la dilo, hadal gango leh oo laga dareemayo cabsi daran ayuu kula hadlay Al-Rabiic, isagoo ballan kula galay inuu u soo saaro 1000 wiil oo dhalinyaro ah, uuna mid kastaana madaxiisa saaro koob dahab ah, sidiina ayuu Al-Rabiic Binu Ziyaad uga aqbalay dalabkii ka yimid Barweez.
Maalin aad u weyn ayeey ahayd:
Maalintii xigtay wuxuu Al-Rabiic Binu Ziyaad soo galay magaalladii, iyagoo dadkii degganaa magaallada-na ay garab socdaan tahliishii (Laa ilaaha Illallaah) iyo takbiirtii (Allahu akbartii) ay qaadayeen muslimiinta. Waxay ahayd maalin aad u weyn oo ka mid ahayd maalmaha Eebbe (sw), sidiina ayuu A-Rabiic Binu Ziyaad sabab ugu noqday inuu furto magaalooyin fara badan oo ka mid ahaa dhulkii ay degganaayeen reer Furus.
Wixii intaa ka danbeeyay, wuxuu Al-Rabiic Binu Ziyaad ahaa geesigaas ay muslimiinta u kaalmaystaan ka hortagga cadoowga Alle ilaa markii danbe dowladdii islaamka ay gacanta u gasho qoys la yiraahdo reer Banii Ummaya. Run ahaantii waxay ahayd nasiib darradii ugu weynayd ee islaamka soo waajaha, kadib markii dowladdii islaamka ee loo wada dhammaa ay la wareegeen qoyskaas reer Banii Ummaya.
Al-Rabiic oo madax looga dhigay Khuraasaan:
Magaalladii Khuraasaan ee la xoreeyay waxaa madax looga dhigay Al-Rabiic Binu Ziyaad kadib markii uu u magacaabay Mucaawiya Binu Abii Sufyaan.
Hase ahaatee, Al-Rabiic Binu Ziyaad kuma qalbi fiyoobeen madaxnimadaas, oo wuxuu jeclaa inuusan madax noqon, weliba wuxuu sii dhibsaday markii uu warqad ka helay ninka la yiraahdo Ziyaad Binu Abiih oo ka mid ahaa madaxdii waaweynaa ee reer Banii Ummaya, dhinaca kalena ka mid ahaa raggii dilay Xuseen Binu Cali wiilkii uu awoowga u ahaa Rasuulka (scw). Warqaddii loo soo diray Al-Rabiic, ayaa waxaa ku qornaa hadalladan �amiiral mu�miniinka Mucaawiye wuxuu ku amrayaa inaad dahabka kiisa huruudka ah iyo kiisa cad (qalinka) kana mid ah qaniimooyinka jihaadka aad u dhigtid bankiga dhexe ee muslimiinta, wixii intaas ka soo harana aad u qaybisid mujaahidiinta�, taasina waa mid si toos uga hor imaanaysa qodobbada ku cad nusuusta qur�aanka. Waxaan ognahay inuu Eebbe (sw) qaybiyay sida loo kala qaadanayo hantida laga soo helo jihaadka, iyadoo shan qaybood qayb la dhigayo baytul-maalka, halka inta soo hartayna loo qaybinayo mujaahidiinta, iyadoo uu qaybinayana amiirka jihaadka.
Noloshii waan ka noogay:
Al-Rabiic Binu Ziyaad Al-Xaarithi dalabkaas si daran ayuu ugu gacan sayray, wuxuuna warqad uu ugu jawaabayo Ziyaad Binu Abiih ku yiri "waxaan kitaabka Alle ka helay amar ka duwan kii aad igu soo amartay magaca amiiral-mu'miniinka", dabadeedna dadkii ayuu isugu yeeray isagoo u dhawaaqayana wuxuu ku yiri "ku soo kallaha qaniimooyinkiinii oo kaalaya qaata", wuxuuna maalkii qaniimada shan meelood meel u diray bankiga dhexe ee muslimiinta ee Dimishiq.
Maalintii jumcada ee xigtay markay timid, wuxuu Al-Rabiic Binu Ziyaad u soo baxay salaaddii jumcada isagoo xiran dhar cadcad. Dadkii ayuu u jeediyay khudbaddii jumcada, dabadeedna wuxuu yiri "dadoow waan ka noogay noloshan ee waan duceenayaaye ee aamiin ii dhaha ducadayda" kadibna wuxuu ku duceystay "Ilaahayow haddaad kheyr ila doonaysid xaggaaga ii qibloow oo i oofso si degdeg ah oo aan dib dhigid lahayn", dadkiina ducadiisa ayeey aamiin u yiraahdeen. Maalintaas qoraxdeeda ma dhicin jeer uu ka dhinto saxaabigii geesigii ahaa ee dunidan dhow ka doortay la kulankii Eebbe (sw). Ilaahay ha ka raalli noqdo, hana u naxariisto saxaabigii jaliilka ahaa ee Al-Rabiic Binu Ziyaad Al-Xaarithi.
SU'AALO: TIJAABI AQOONTA AAD U LEEDAHAY AL-RABIIC BINU ZIYAAD AL-XAARITHI